Farmaajo ayaa xog ka helay danjiraha cusub ee Itoobiya - Axadle – Axadle
Muqdisho (Axadle) – Madaxweynaha xilka kasii degaya Maxamed C / llahi Farmaajo ayaa maanta aqbalay macluumaadka Safiirka cusub ee Ethiopia u fadhiya Somalia, C / fataax C / llahi Xasan.
Farmaajo ayaa sidoo kale dhambaal ka helay safiirka iyo salaan uu ka siday madaxweynaha Itoobiya wuxuuna ku wargaliyay madaxweynaha xilka ka sii degaya guulaha muhiimka ah ee ay gaartay dowladiisa sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Villa Soomaaliya
“Danjiraha Jamhuuriyadda Federaalka Dimuqraadiga ee Federaalka Itoobiya Mudane Cabdifataax Cabdullaahi Xasan ayaa u gudbiyey salaan uu ka siday Madaxweynaha Itoobiya, Sahle-Work Zewde, wuxuuna uga mahadceliyey shacabka iyo dowladda Soomaaliya soo dhaweynta diirran” ayaa lagu yiri qoraalka.
“Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa uga warbixiyay Danjiraha Dowladda Federaalka Soomaaliya guulaha la taaban karo ee ay ka gaareen dhinacyada dib u dhiska ciidamada, xoojinta dowladnimada, horumarinta dhaqaalaha, la dagaallanka argagixisada iyo musuqmaasuqa”.
Danjire C / fitaax C / llaahi Xasan ayaa dhankiisa muujiyay sida ay uga go’an tahay xoojinta xiriirka labada dal ee ku dhisan iskaashiga iyo is qadarinta, wuxuuna carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo madaxbanaanida dal kasta.
Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ayaa xusay in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ka go’an tahay in la dhiso lana xoojiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee ku saleysan iskaashiga, deris wanaaga iyo iskaashiga, iyadoo xoogga la saarayo sidii loo horumarin lahaa heerka nolosha iyo dhaqaalaha shucuubta Geeska Afrika.
Maaha markii ugu horeysay ee madaxweynaha xilka ka degayaa uu ogolaansho ka helo safiir u fadhiya dal kale, marka uu waqtigiisa dhamaado.
Sharciga Soomaaliya ayaa dhigaya in madaxweynaha uu xog ka helo danjireyaasha caalamka si ay xilka ula wareegaan, laakiin xilligan Soomaaliya malahan madaxweyne sharci ah oo waqtigiisii ​​xafiiska uu dhammaaday.